नामुद ज्योतिष भन्छन : कपिलको ग्रह-नक्षत्र ठीक छैनन , अझै १ बर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने | Jukson
नामुद ज्योतिष भन्छन : कपिलको ग्रह-नक्षत्र ठीक छैनन , अझै १ बर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने
यतिबेला एकपछि अर्को समस्यामा फस्दै गएका छन्, कमेडियन कपिल शर्मा । करियरको त्यो उचाईमा पुगेका उनी किन यसरी पछारिदैछन् ?
हिजो अर्थात अप्रिल २ मा उनको जन्मदिन । यहि मेसोमा एक हिन्दी अनलाइनले कपिल शर्माको ग्रहदशा हेराएका छन्, नामुद ज्योतिषसँग । ज्योतिष भन्छन्, ‘कुम्भ राशीका कपिलले अझै तमाम समस्याबाट उम्कन १ बर्ष संघर्ष गर्नुपर्नेछ । यसबीचमा उनले धेरैजसो अशुभ घटनाको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सेप्टेम्बर १२ पछि उनले मानसिक रुपले राहत पाउनेछन् तर, त्यसपछि पनि उनले अरु शारीरिक कष्ट भने झेल्नुपर्ने ज्योतिषको भनाई छ ।
कपिल शर्माको चर्चित विवादहरु
१. कपिल अहिले आफ्ना को-स्टार सुनील ग्रोवरसँगको विवादले चर्चामा छन् । अस्ट्रेलियाबाट स्टेज शो पछि मुम्बई र्फकने क्रममा उनले सुनिललाई गाली गर्नुका साथै हातपात गरेका थिए । भनिन्छ, त्यसबेला उनी रक्सीले टिल्ल थिए । पछि कपिलले सुनीलसँग ट्वीटरमै माफी मागे । तर, सुनिलले माफी दिएनन् ।
२. यसअघि पनि कपिल शर्माको कर्लस टेलिभिजनमा चर्चित ‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’मा सुनील ग्रोवर ‘गुत्थी’को भूमिका निर्वाह गरेर चर्चित भएका थिए । तर, बीचमा उनलेक कपिलको शो छाडेर स्टार प्लसमा आफ्नो छुटै शो चलाउन थाले । जब उनी सफल भएनन्, फर्किएर सुनिलकहाँ आइपुगे ।
३. एक पटक कपिल शर्माले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ट्याग गर्दै लेखेका थिए, ‘यो हो तपाईको राम्रो दिन ।’ किनभने मोदीले निर्वाचनका क्रममा नारा दिएका थिए, ‘अच्छे दिन आनेवाला है ।’ सायद प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले नारा दिएजस्तो शुसासन कायम गर्न नसकेकोमा कपिलले तीतो पोखेका थिए । तर, यस स्टाटसले उनलाई विवादको घेरामा पार्‍यो ।
४. कपिलले मुम्बई महानगरपालिकामाथि घुसखोरीको आरोप लगाएका थिए । तर।, पछि उनी स्वंम विवादमा फसे । पछि बढ्दो विवादलाई पूर्ण विराम लगाउन उनले ट्वीट गरे, ‘मैले जो व्यक्तिसँग भ्रष्टचारको अनुभव सामना गर्नुपर्‍यो, त्यसैको लागि चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ । यो कुनै राजनीतिक दलको लागि आरोप होइन ।’
५. कपिल शर्माले अन्धेरीस्थित आफ्नो बंगलामा अबैध निर्माण गरेको र एक किसिमको बृक्ष कटाएको आरोप पनि लागेको थियो ।
६. २००४ मा सेलिब्रेटी क्रिकेट लिग होस्ट गरे बापत कपिलले १ दशमलव २५ करोड भारु पारिश्रमिक मागेका थिए । उनको यो माग पुरा भयो । तर, कपिलले त्यसको तेब्बर बढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने दाबी गरे । किनभने उनलाई भेनेटी भ्यान दिइएको थिएन । अहिले कपिलले त्यसका लागि माफी मागेका छन् ।
६. कपिल शर्माले आफ्नो शोमा जब एक गर्भवती महिलाको मजाक उडाए, केहि महिला संगठनले उनको विरोध गरे । पछि कपिलले माफी मागे ।
‘पलाँस’ टोली पोखरामा
पृथ्वी जयन्तीमा शुभकामना दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भने, आशाको दियो जाग्यो
‘पोखरा इन्टरनेट’ प्रयोगकर्ताले एउटै केबुलबाट इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन हेर्न पाउने